SEOmoz naputara nne nke SEO niile Apps | Martech Zone
Abụ m onye na-akwado Rand Fishkin na SEOmoz. Ọtụtụ mgbe, ana m anụ ntamu na ụlọ ọrụ Search Engine Optimization banyere SEOmoz nke ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụ ihe ọjọọ… mana enwebeghị m ike ịhụ otu nzukọ na-enweta ọtụtụ akụ, ndị ọkachamara, ngwa ọrụ na ule gbasara SEO.
Rand, ya onwe ya, bu ihe ozo mere m ji hu SEOmoz n'anya. N'oge na-adịbeghị anya, mgbe m chọpụtara otu ihe dị ịtụnanya na otu n'ime saịtị ndị ahịa m gafee peeji nke ha (ọtụtụ nde) peeji nke, Rand wepụtara oge mgbe ọ gụsịrị ọrụ ka o nwee ike iji nke anyị. O gere anyị ntị, gụọ akwụkwọ, ma nyere anyị aka mepụta atụmatụ ule. O gosikwara ọtụtụ ihe anyị na-enyo enyo. Nwoke mara mma nke onwe! Abụ m onye otu PRO na ọ naghị ala azụ inye aka.
SEOmoz ugbu a beta na-anwale ngwa ngwa Organic Search Web maka nsuso mgbalị nyocha njin ọchụchọ gị. N’oge gara aga, ụmụ nwoke SEO dị ka m jiri nchikota nke Ngwa SEOmoz, Webmasters, Nchịkọta, Labs Authority, Ebube di nma, na Semrush iji soro ọtụtụ mgbanwe:
Ọsọ mpi - Na-elele ndị na-asọmpi organic.
Ọnọdụ isiokwu - ikiri isi okwu anyi na nsochi.
CTR na Mgbanwe - nlekota pịa-site na ọnụego na ibe anyị na ntụgharị nke ndị ọbịa n'ime ndị ahịa.
backlinks - nlekota onye na-ejikọ anyị na ike nke saịtị ndị ahụ.
Crawl Ule - nyochaa peeji na saịtị na saịtị iji hụ na kachasị ọdịnaya maka engines ọchụchọ.
SEOmoz na-aga n'ihu karịa ihe m tụrụ anya ya dị ka ihe mmụta. Vidio ọzụzụ ha dị elu, ngwa ọrụ yana ọkaibe dị ka ndị na-eweta ọrụ na-aga n'ihu na-akawanye mma. Updebanye aha maka SEOmoz ruo otu afọ na ịga otu ihe omume SEOmoz nwere ike ịkwụ ụgwọ maka nzukọ gị. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ na-achọ ịgbasa onyinye imewe gị na nchọta, SEOmoz kwesịrị.
Ekele Rand na nzukọ ya na mgbakwunye a. Ana m atụ anya ịhụ ọrụ gbasaa na afọ na-esote. M na-esetịpụ mkpọsa mbụ m na ya! Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ya na mmemme, SEOmoz nwere ọtụtụ Webinars ndokwa na ngwa PRO, debanye aha ugbu a.
Tags: nyocha ọchụchọorganic seosearch engine njikarịchaAseo moztoolsseomoz
dị jụụ, mana ọnụ dị ka hel…